::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather चारवर्ष भित्र बैंकलाई उत्कृष्ट बैंक बनाउछौं:: Rojgar Manch ::
किरणकुमार श्रेष्ठ, सिइयो, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक
शनिवार, २०७३ श्रावण ०८ गते ११:२८
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा स्थापित नेपालको दोस्रो पुरानो र सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक हो । समय सापेक्ष आफ्ना ग्राहकहरूलाई विविध बैंकिङ्ग सेवा पु¥याउँदैको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक २०२२ साल माघ १० गते स्थापना भएको हो । ६७ जिल्लामा शाखा कार्यालय रहेको यस बैंकले भर्खरै नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लामो समयदेखि खाली रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट किरणकुमार श्रेष्ठले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । संखुवासभा चैनपुरमा जन्मनुभएका श्रेष्ठले यसअघि नेपाल बैक लिमिटेडमा महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीको सम्हालिसक्नुभएको छ । श्रेष्ठले देशको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा बैकको भूमिका अभिवृद्धिका लागि आफूले पेस गरेको व्यावसायिक योजनाबमोजिम अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासहित आगामी चार बर्षमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई नेपालको नै उत्कृष्ट बैंक बनाउने महत्वकांक्षा लिनुभएको छ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका भावी रणनीति, योजना र अनुभवसहित राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठसँग अर्थ र रोजगारले गरेको छोटो कुराकानी :
तपाईले बाहिर बसेर हेरेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र अहिले आफै सिइओ भएर हेर्दा तथा काम गर्दा कस्तो पाउनुभयो ?
बाहिरबाट हेर्नु र भित्र सतहमै पुगेर हेर्नुमा धेरै फरक हुन्छ । मलाई पनि बाहिरबाट हेर्दा सरकारी बैंक भएको हुँदा पुरानो सोच र प्रविधि नै त होला भन्ने लाग्थ्यो । तर, जब भित्र आएँ, यहाँको कार्यप्रणाली, जनशक्ति तथा निर्णय प्रक्रिया देख्दा बाहिर बसेर हेर्नु र सतहीमा गएर हेर्नुमा कति भिन्नता हुँदोरहेछ भन्ने प्रष्ट हुने मौका पाए ।
लामो समयसम्मको बैंकिङ अनुभवसहित तपाई सरकारी स्वामित्वको बैंकमा आउनुभएको छ । भनेपछि भोलिका दिनमा बैंकलाई अगाडि बढाउने तपाईका त्यस्ता योजना के छन् ?
मैले सबैमाझ ४ वर्षभित्र यो बैंकलाई सबै हिसावबाट उत्कृष्ट बैंक बनाउछु भन्ने दृढदा गरेको छु । त्यसका केहि आधार र कारणहरु पनि छन् । पहिलो त यो सरकारको शतप्रतिशत लगानी भएको बैंक हो र नेटवर्कको हिसावले ६७ जिल्लामा यसको संजाल छ, अब दुई वर्ष भित्र ७५ वटै जिल्लामा यसलाई पु¥याउने हाम्रो प्रण छ । आम नेपालीले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्नु हाम्रा लागि थप हौषलाको विषय हो, यसैले पनि होला अहिलेको अवस्थामा १ खर्ब ३५ अर्बभन्दा बढी निक्षेप हामसँग छ । अहिले बजेट भाषणपछि लगानीका प्रचुर संभावना थपिएको छ । हामीकहाँ जम्मा भएका निक्षेप लगानीको अवसर प्रचुर छ । अहिले पनि बर्षेनी ३ अर्ब मुनाफाको अवस्था छ यसमा बृद्धि आउने संभावना अब छ । उता नयाँ प्रविधि र जनशक्तिमा हामीले जोड दिएका छौ । समयसापेक्ष नयाँ ढंगबाट बढ्ने हाम्रो योजनाले पक्कै पनि उत्कृष्ट बैंक बन्ने हाम्रो लक्ष्य पुरा हुनेछ ।
तपाईले यसो भनिरहँदा सरकारी बैंकका सेवासुविधा र पहुँच निजी बैंकका तुलनामा कमजोर छ भन्ने जनमानसमा छ । यसलाई चिर्न सहज छ र ?
कतिपय सन्दर्भमा त्यस किसिमका कमी कमजोरी हामीमा देखिएका पक्कै पनि छन् । तर अहिले जुनढंगको प्रविधि, जनशक्ति र काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याएका छौ यस हिसावमा बजारमा अन्य प्रतिस्पर्धी बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आफ्ना सेवासुविधा र विश्वासलाई उच्च बनाउने दृढतासहित हामी अघि बढेका छौ ।
बाणिज्य बैंकहरुले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई लक्षित गरेर रेमिट्यान्सको सेवा पनि दिइरहेको छ, अहिले यसको अवस्था कस्तो छ ?
हो, हाम्रो बैंकले पनि आरबीबी रेमिट संचालनमा ल्याएको छ । अहिले विशेषगरी खाडी मुलुकमा आफ्नै कर्मचारी राखेर रेमिट्यान्स सेवा प्रवाह गरिरहेका छौ भने कोरिया, जापान, अमेरिकालगायतका मुलुकमा सेवा विस्तारको अन्तिम चरणमा छौ हामी । आगामी दिनमा आरबीबी रेमिटलाई व्यापक बनाउन र विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीको पहुँचमा पु¥याउन विभिन्न योजनाहरु ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौ ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा फर्किएकाहरु स्वदेशमै लगानी गरेर केहि गर्न चाहन्छन तर उनीहरु बैंकको पहुँच वा सुविधाबाट अलि टाढा नै छन । उनीहरुलाई उत्प्रेरणा दिन बैंकहरुले के गर्नुपर्ला र यसबारेमा यहाँहरुको योजना के छ त ?
वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका तथा गएर फर्किएका दुवैलाई बैंकिङ पहँुच र सुविधामा ल्याउन जरुरी छ । झन रोजगारीबाट फर्किएकाहरुले विभिन्न सीप र साथमा पूँजी पनि ल्याएका हुन्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका तथा रहेका नेपालीलाई बचत गर्न प्रेरित गर्नुका साथै उनीहरु फर्कदा क्षमताको पहिचान गरेर त्यस किसिमका प्रोडक्ट ल्याउने योजनामा हामी छौ । सरकारले पनि सँगसँगै यस्ता जनशक्तिलाई सीप विकाससँग जोड्ने र बैंकिङ पहुँचमा पु¥याउने वातावरण बनाउने हो भने उनीहरुले आफ्नो सीप र ज्ञानलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने थिए ।
रेमिट्यान्स आउने क्रम बढदो छ तर यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागेन भन्ने गुनासो छ । यसलाई यहाँले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
रेमिट्यान्सबाट जुन रकम आइरहेको छ त्यसको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि कतिपय सन्दर्भमा अन्यत्र प्रयोग भएको देखिन्छ । जबसम्म हामीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याएर बचत गर्ने बानीको बिकास गर्दैनौ र उनीहरुलाई लगानीसँग जोड्न सक्दैनौ तवसम्म यस्तै स्थिती रहिरहन्छ । जसले रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन्, उनीहरुमा पनि उत्पादममूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ भन्ने चेतनावृद्धि गर्न जरुरी छ ।
धेरै संजाल र ग्रामिण भेगमा पनि आफ्नो उपस्थित जनाएको बैंकका रुपमा राबा बैंक परिचित छ । तर, अझ पनि ग्रामिण भेगका विशेषगरी कृषक बर्गको पहुँचमा त पुग्न सक्नुभएको छैननी ?
अझै पनि ५५ प्रतिशत भन्दा बढि जनता बैंकिङ पहुँच बाहिर नै छन् । हामी ग्रामिण भेगमा पुगे पनि अझै बास्तविक गाउँहरुमा पुग्न सकेका छैनौ । अधिकांश बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु सदरमुकाम तथा शहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित छन् । हामीले अहिले कृषि क्षेत्रको विकास नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको ठोसढंगबाट विकास हुन सक्दैन र यो विना जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिदैन भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै कृषि क्षेत्रको कर्जालाई विस्तार गरिरहेका छौ । उता हामी शाखा विस्तारका क्रममा ग्रामिण भेगलाई लक्षित गर्ने र जनताको बैंक बन्ने कुरामा गम्भिरढंगले लागिपरेका छौ ।
सरकारले प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता भन्ने अवधारणा ल्याएको छ, यसमा तपाईहरु कत्तिको हिस्सेदारका लागि तयार हुनुहुन्छ ?
अब कुनैपनि वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ग्रामिण भेगमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्नु जरुरी छ । हाम्रै बैकको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हामीले प्रत्येक वर्ष २०÷२५ वटा शाखा विस्तार गरिरहेका छौ । यसै वर्ष पनि करिव २० शाखा विस्तारको योजनामा हामी छौ । संजाल विस्तारमा हामीले जुन ठाँउमा कुनै पनि बैंकहरु पुगेका छैनन त्यस्ता ठाँउलाई केन्द्रित गरेका छौ । बैंकिङ पहुँच नपुगेको ठाँउमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो । सरकारले अहिले जुन हरेक नेपालीको बैंक खाता भन्ने अवधारणा ल्याएको छ यसलाई हामी हाम्रोतर्फबाट पूर्ण सहयोग पुग्ने गरी योजनाहरु बनाइरहेका छौ ।
पछिल्लो समय देशको अवस्थाले समग्र अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको छ । भोलिका दिनमा यो कुन दिशातर्फ जाला भन्ने यहाँलाई लाग्छ ?
गएको वर्ष भुकम्प, नाकाबन्दी, तराई आन्दोलनलगायतले देशको औद्योगिक, व्यापारिक क्षेत्रमा असर पारेकै हो तर धरासायी नै बनेको चाहि छैन । यसले केहि पाठ चाहि पक्कै सिकाएको छ । एउटा त हामीले आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्दोरहेछ र यसो भएमा अन्य कुराहरु व्यवस्थापन गर्न सकिदोरहेछ भन्ने सिकायो । सामान्यतया कृषि क्षेत्रको संभाव्यताबाटै हेर्दा पनि कैयौ कुराहरु गर्न सकिदोरहेछ भन्ने देखाएको छ । हामीले यही भित्र गर्नसक्ने कुराहरु धेरै छन त्यसो भएकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कुरामा लगानीलाई केन्द्रित गर्न आर्थिक योजनाहरु त्यही ढंगमा अघि बढनुपर्छ र यसले मात्र देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर विभिन्न समस्या आउदा पनि अघि बढन सकिन्छ भन्ने देखिन्छ ।
अबको मुलुकको लक्ष्य आर्थिक आन्दोलन र समृद्धि नै हो त ?
धेरै परिघटनाहरु हामीले हेरिसकेका छौ । आधारभूत र विशेषगरी राजनैतिक मुद्धाका विषय व्यवस्थापन भैसकेको सन्दर्भमा अबको मुद्धा भनेकै आर्थिक समृद्धिको हो । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाएर जनताको जिवनस्तर सुधार्दै देशलाई विकासको बाटोमा डो¥याउनु पर्ने अहिलेको माग र आवश्यकता नै यही हो ।
अन्त्यमा भोलिका दिनमा यो बैंकलाई नेपालीको बैंक र आफ्नो बैंक भन्ने अनुभूति गराउनका लागि के भन्नुहुन्छ ?
सरकारको स्वामित्वको बैंक भएकाले यो जनताकै बैंक हो । हामी जुन ढंगमा मुलुकका हरेक क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरिरहेका छौ र यसले साना बचतकर्ता र लगानीकर्तादेखि लिएर ठुला उद्योग व्यवसायीहरुसम्म पुग्ने कोशिषमा छौ । हाम्रो जुन उद्देश्य तथा कार्यक्रमहरु छन त्यो नेपालीकै बैंक बनाउने बाटोमै छ । आगामी दिनमा हामीले आफुमा भएका कमिकमजोरी सच्याउदै गुणस्तरीय, छिटोछरितो र विश्वासिलो सेवा प्रवाहमा प्रतिवद्ध भएर लागेका छौ ।